Siday wax noqonayaan haddii aanan iibsan karin waxba anigu oo aan u baahdo en qof kale wax ii soo iibiyo?
Waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka "Mis beneficios" ee aad ka heleyso app-ka WICShopper si aad u aragto gunnooyinkaaga wakhtigan.
Geli PIN-kaaga oo riix badhanka ingrese ee ku taal shaashadda.
Xaddiga lae ee shayada cuntadaada iyo xaddiga lacageed ee khudaartaada cagaaran iyo khudaarta bisil ee aad iibsatay ayaa laga goosan doonaa xisaabtaada WIC.
¿Waa maxay PIN (Número de identificación personal (Lambarka Aqoonsiga Shakhsi Ahaaneed))?
PIN-ku waa afar lambar oo señor ah, oo kaadhka la socda, kaas oo kuu sahlaya inaad ku gasho gunnada WIC. Marka aad dooranayso PIN, waxaad doorataa afar lambar oo fudud oo aad xasuusan karto, laakiin y ku adag tahay en qof kale garto (tusaale ahaan, taariikhda dhalashada waalidkaa ama taariikhda dhalashada ilhahaada).
HA siinin cid PIN-kaaga aanad doonaynin inuu kaadhkaaga isticmaalo. Haddii qof garanayo PIN-kaaga oo uu isticmaalo kaadhkaaga si uu isticmaalo gunnadaada cuntada ah adiga oo aan uggolaanin markaa gunnooyinkaas laguuma baddalo.
Siday wax noqonayaan haddii aan illoobo PIN-kayga ama aan doonayo en badana?
HA isku dayin inaad ku nasiibiso PIN-kaaga. Haddii PIN-ka aad gelisay aanu sax ahayn oo aad afar jeer isku daydo, PIN-kaaga waa la xidhi doonaa. Tani waxaa loo sameeyaa si looga hortago en qof ku nasiibiyo PIN-kaaga oo uu qaato gunnada cuntadaada. Si aad u furto kaadhkaaga waa inaad sugtaa ilaa saqbadhka markaa ayay xisaabtaadu si otomaatig ah u furmi doontaa.
Si waafaqsan sharciga xuquuqda madaniga ah ee federaalka iyo Maraykanka. Waaxda Beeraha (USDA) shuruucda xuquuqda madaniga ah iyo xeerarka, USDA, Wakaaladaheeda, xafiisyada, iyo shaqaalaha, iyo hay'adaha ka qayb galaya ama maamulaya barnaamijyada USDA waxaa laga mamnuucay ku taka kan taka. midabka, asalka wadaka, galmada, caqiidada diinta, naafanimada, da'da, rumaynta siyaasadeed, ka aarsiga ama aargoosiga hawl xuquuq madani oo hore barnaamij kasta ama hawl ay qabatay ama maalgelisay USDA.
Dadka naafada ah ee u baahan qaab kale oo wada xidhiidh oo macluumaadka barnaamijka ah (tusaale, Farta qoraalka indhoolaha, daabacaad wayn, cajal maqal ah, Luqadda Dhegoolaha ee Maraykanka, iwm), waa xaaaaaaaaaaaaaaaaaa con guayakaaaaaaaaaaaaa con guaaaaaaaaaaaaaaaaa con guadaau ka soo codsadeen dheefaha. Dadka dhegoolaha ah, maqalku ku adagyahay ama leh naafo hadalka ah waxay kala soo xidhiidhi karaan USDA es gaadhsiinta Federaalka ee Dadka Nafada ah lambarkan (800) 877-8339. Intaa waxa dheer, macluumaadka barnaamijka waxaa lagu heli karaa luqaddo kale.
Si loo gubiyo cabashada takoor la'aanta, buuxi foomka Cabashada Takoorka ee Barnaamijka UDSA, (AD-3027) oo onlayn lagaga helo:
Cómo presentar una queja, iyo xafiis kasta oo USDA ah, ama qor warqad ku socotaUSDA oo warqadda ku bixi dhammaan macluumaadka lagu codsaday foomka. si aad u codsato nuqul foomka cabashada ah, soo wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga la buuxiyay ama warqadda USDA addoo adeegsanaya:
(1) boosta: Maraykanka. Waaxda beeraha Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410;